လမ်းညွှန်အွန်လိုင်း Forex ကုန်သွယ်သင်ယူခြင်း | mindaforex.com
Ganifx/ နိုဝင်ဘာလ 7, 2017/ ဆက်စပ်မှု/0မှတ်ချက်များ
ယခင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအချို့ထံမှ, အဆိုပါ Forex ဈေးကွက်ထဲမှာ intermarket ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အခြေခံကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်အဖြစ်: အဆိုပါ Dow အကယ်လို့, အဆိုပါဂျပန်သတင်းစာ Nikkei အညွှန်းကိန်းကိုလည်းကျဆင်း. ကမ္ဘာ့စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အကြား၎င်း၏အပြုသဘောဆက်စပ်မှုများအပြင်, ထို့အပြင်အမေရိကန်စီးပွားရေးဂျပန်နီးကပ်စွာဆက်စပ်သောကွောငျ့. ယင်းအညွှန်းကိန်း Nikkei ကပြုတ်ကျခဲ့လျှင်, အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY လည်း JPY အားနည်းသို့မဟုတ်ခိုင်ခံ့စေ၏, နှင့်အပြန်အလှန်, ငွေကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာတက်ဂျပန်သတင်းစာ Nikkei လျှင်…
ရွှေနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာသူ့ဟာသူအကြားဆက်ဆံရေးဟာအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုရှိသည်ဖို့လေ့. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကြီးထွားလာသည်အစဉ်အလာသည့်အခါ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်, ရွှေရောင်းဖို့လေ့, နှင့်အပြန်အလှန်. ထို့အပြင်ယခုအမေရိကန်တဒေါ်လာနှင့်ဂျပန်ယန်း, လုံခြုံ-ဆိပ်ငွေကြေးကိုစဉ်းစားနှင့်တဦးတည်းတော်တော်လုံခြုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု tool တစ်ခုဖြစ်သည်ထားပြီး. ရေနံစိမ်း, သို့မဟုတ်မကြာခဏ '' အနက်ရောင်ကိုရွှေ '' အဖြစ်ရည်ညွှန်း…
Ganifx/ အောက်တိုဘာလ 30, 2017/ ဆက်စပ်မှု/0မှတ်ချက်များ
အထွက်နှုန်းနှောင်ကြိုးစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်တစ်ခုညွှန်ပြချက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. အမေရိကန်နှောင်ကြိုးအထွက်နှုန်းအမေရိကန်မြို့တော်စျေးကွက်၏အခြေအနေဆိုတာကိုပြသ, အရှင်အမေရိကန်ငွေကြေးစနစ်များအတွက်ဝယ်လိုအားထင်ဟပ်. ဘဏ်အတိုးနှုန်းဟာငွေဖောင်းပွမှုရောင်ပြန်ဟပ်. အတိုးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့လျှင်, နှောင်ကြိုးအထွက်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနှင့်နှောင်ကြိုးစျေးနှုန်းကျဆင်းသွားခြင်း. ဘဏ်အတိုးနှုန်းအတွက်တိုးခိုင်ခံ့စေ၏ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟု. ဒါကြောင့်မြင့်တက်နှောင်ကြိုးအထွက်နှုန်း (သို့မဟုတ်…
လောလောဆယ်နှောင်ကြိုးစျေးကွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်စနစ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်, အမြဲတမ်းစိုးရိမ် Forex ကုန်သည်များ. တစ်ဦးကနှောင်ကြိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတိုင်းပြည်များ၏အစိုးရမှချေးငွေရန်ပုံငွေပေးသွားရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပြီအထောက်အထားဖြစ်ပါသည် (အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များသို့မဟုတ်အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များများအတွက်) သို့မဟုတ်တစ်ဥပဒေရေးရာ entity (ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဘွန်းမှ), အဆိုပါနောက်ဆုံးနေ့နှင့်နှုန်းသည်အားဖြင့်…
နည်းနည်းယခင်ဆွေးနွေးမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောထားပြီးအဖြစ် , စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းအထူးသဖြင့်အဓိကညွှန်းကိန်းများနှင့်ငွေကြေးမကြာခဏကုန်သွယ်ကြပြီနိုင်ငံများအတွက်ငွေကြေးနှင့်အတူတစ်ဦးသည်အလွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိပြီးကြောင်း. ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များတွင် intermarket ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏အခြေခံနိယာမ, ရှိ3တူရိယာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သြဇာလွှမ်းမိုး, စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းအညွှန်းကိန်းဆိုလိုသည်မှာ, စျေးနှုန်းနှင့်အထွက်နှုန်းနှောင်ကြိုး (အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များသို့မဟုတ်နှောင်ကြိုး…
ကမ္ဘာပေါ်မှာ STOCK INDEX
ပေးထားသောဧရိယာအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပြည်နှစ်ခုလုံးဖျက်သိမ်းမှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အစီအစဉ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများအတွက်ရည်ညွှန်းသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်သည့်အများအားဖြင့်တွေ့ရှိရအရေးကြီးသောစတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းမှာတော့. သည်အဓိကညွှန်ကိန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြို့သောအရေးကြီးသောကမ္ဘာကြီးစတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်း: 1. အဆိုပါ Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ (DJIA, သို့မဟုတ် Dow Jones) – ယူနိုက်တက်စတိတ် Dow Jones အညွှန်းကိန်းကိုကိုယ်စားပြုမယ့် key ကိုညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည် 30 ကုမ္ပဏီ…
ကုန်သွယ်တူရိယာတွေအများကြီးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏ကမ်ဘာပျေါတှငျ , Forex အဖြစ်, အညွှန်းကိန်း , စတော့ရှယ်ယာ . တစ်ခုချင်းစီကိုတူရိယာအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ခဲ့သည်. ဤရွေ့ကားဆက်ဆံရေးကိုမကြာခဏ intermarket ဟုခေါ်ကြသည်. တစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်တူရိယာနှင့်အတူစျေးကွက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအကြား Intermarket အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်ဆံရေးနှင့်အပြန်အလှန်. အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက်၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားထိခိုက်စေ, စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်နှင့်ကုန်စည်စျေးကွက်များအကြားဥပမာ,…
2015 - 2020 ©အားဖြင့် Powered Theme Vision.